MDC-T inoti izvi zvinoshamisa kuti VaMugabe vanoita zvakadai, panguva iyo nyika iri kukangwa nenzara inotysa.
Mutauriri weMDC-T, VaObert Gutu, vanoti zvaitwa naVaMugabe hazvina kusiyana nababa vemusha vanosiya imba yavo ichitsva vachimhanyira kunodzima moto uri kupisa imba yemuvakidzani wavo.
Pakusiya kwavo husachigaro hwesangano re African Union, VaMugabe vakashoropodza tsika yenyika dzemuAfrica yekutarisira zvipo nerubatsiro kubva kunyika dzekunze, vakavimbisa kuti vaizopa mombe senzira yekukurudzira nyika dzemuAfrica kuti dzisangovimba nerubatsiro rwekumawirira chete.
Bepanhau reHerald rinoti mombe idzi dzakasvitswa kusangano iri kuburikidza nemutevedzeri wasachigaro we African Union Commission, VaErastus Mwencha, avo vakasvika munyika neChina kuzotambira chipo ichi.
Mombe idzi dzinonzi dzakabviswa nevanhuwo zvavo vaida kubatsira. Kusvika pari zvino nyika inonzi yarasikirwa nezviuru zvemombe kubva kunzara yakabata nyika.